09 July 2020 Volume :8 Issue :30
USolwazi Anil Chuturgoon, uDkt Veron Ramsuran noDkt Lungi Mkhize-Kwitshana bajabule ngokuthola i-ILEX, umshini wokuhlolela i-COVID-19.Click here for English version
IKolishi lezeSayensi yezeMpilo e-UKZN lithole umshini obizwa nge-ILEX Genehecker (i-ultra-fast pcr) obiza ama-$10 000 wokuhlola i-COVID-19 ngokushesha.
Lo mshini unikelwe yi-Gift of the Givers ngemva kwesicelo sabacwaningi base-UKZN oSolwazi Anil Chuturgoon, uDkt Veron Ramsuran noDkt Lorna Madurai. UMadurai uneqhaza ekuhloleni inkundla ye-COVID-19.
Lo mshini unikezwe i-UKZN mhla zingama-25 kuNhlangulana, wase ubekwa eMicribiology Laboratory e-Howard College okuyigumbi lokuxilonga okumanje lisetshenziselwa ukuhlola i-COVID-19.
‘Lo mnikelo wesihle uzokwenza sikwazi ukuba namandla okuthola imiphumela esheshayo yokuhlolela i-COVID-19 kubasebenzi nabafundi bethu. Khonamanjalo, ngokwemukela abantu bangaphandle sizokwazi ukwenzela iNyuvesi imali edingeka kakhulu,’ kusho u-Chuturgoon oyiDini elisabambilelezoCwaningo e-CHS nomcwaningo omkhulu kwezokuhlolela i-COVID-19 e-UKZN. ‘Umusa we-Gift of the Givers nomsunguli wayo uDkt Imtiaz Sooliman, nongumlandeli omkhulu wenyuvesi ayefunda kuyona, uyabonakala njengoba i-UKZN namanye amanyuvesi emhlabeni bezama ukulwa nokuqeda lolu bhubhane.’
U-Chuturgoon ubalule ukuthi i-ILEX ikhipha imiphumela ngamahora ayisithupha esikhundleni sosuku lonke ngethuluzi ebelikhona.
UDkt Veron Ramsuran, omunye wabacwaningi abakhulu, uthe: ‘Sijabule kakhulu ukuthola ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu okuzoba nomphumela omkhulu ngokwesikhathi sokukhipha imiphumela, ikakhulukazi ezimweni zobungozi obukhulu.’ UDkt Lungi Mkhize-Kwitshana uvumelane naye, wathi: ‘Leli thuluzi lizoba neqhaza nasekuphuculeni umkhankaso omuhle wokucwaninga waseKolishi’.
U-Sooliman uthe: ‘Okwenza i-UKZN yehluke yizinga, ukuphokophela nekhono labantu bakhona ngamunye neminyango yakhona abahlale bekhuphula izinga elingalandelwa ngabanye. Amasampula e-COVID-19 e-Gift of the Givers ahlolwa kulesi sikhungo e-UKZN. Umsebenzi, ubungcweti, ukukhuthalela ukucwaninga, ukuzithoba nokuzinikela ngokweqiniso ebantwini akungatshazwa. Ukweseka isikhungo esinjalo ngomshini i-ILEX pcr, uma sikhuluma iqiniso, empeleni akwenele. USolwazi Chuturgoon nethimba lakhe elizinekelayo benza umsebenzi omuhle benzela lesi sikhungo esikhulu.’